Leave a Reply to Hirad
Sucuudiga oo xaraashay dhismihii lagu dhex khaarajiyey Wariye Jamaal Khashoggi.
Daawo:-Shirkii maalgashiga Puntland oo Garoowe kusoo xidhmay & War-Murtiyeed.
Daawo:-Dowladda Federaalka oo la wareegtay dhismaha Galmudug-ta cusub-Video
Puntland oo Madaxda Dowladda Federaalka uga digtay mudo kororsi-Akhriso
Daawo:-Qof kasoo jeeda qowmiyadda Oromadda oo Laascaanood ku geeriyooday-Video
Akhriso:-Saldhiggii Berbera wuxuu raacay isbedalka Imaaraadka ee dhinaca istaraatiijiyada.
Madaxweyne Farmaajo oo gaadhay Dhuusamareeb iyo ujeedka Safarkiisa-Sawiro
Boosaaso dil ka dhacay xarun ay degan yihiin hay,addo Caalami ah.
Daawo:-Ilhaan oo ka jawaabtay eedeyn uga timid shaqsi Hooyadii la khaarijiyey-Video
Soomaali lagu dilay Kenya kadibna la gubay Meydkooda-Akhriso